News - Sida nalka UV u shaqeeyo
Kahor intaadan ka jawaabin su'aashan bal arag waxa loo yaqaan UV Lighting.
Marka hore, aan dib u eegno fikradda UV. UV, ama ultraviolet, ama ultraviolet, waa mawjad elektromagnetic ah oo leh dherer u dhexeeya 10nm iyo 400nm. UV ee kala duwanaanta mowjadaha kala duwan ayaa loo qaybin karaa UVA, UVB iyo UVC.
UVA: dhererka dhererkiisu waa dheer yahay, inta udhaxeysa 320-400nm, kaas oo gali kara daruuraha iyo muraayadda qolka iyo gaariga, wuxuuna dhex geli karaa maqaarka maqaarkiisa, taasoo sababi karta gubasho. UVA waxaa loo qeybin karaa uva-2 (320-340nm) iyo UVA-1 (340-400nm).
UVB: dhererka dhererka wuxuu ku yaal dhexda, inta udhaxeysa 280-320nm. Waxaa nuugi doona lakabka ozone, oo sababa gubasho qorrax iyo casaan maqaar, barar, kulayl iyo xanuun. Xaaladaha daran, nabarro ama xoqitaan ayaa dhici doona.
UVC: dhererka dhererkiisu wuxuu udhaxeeyaa 100-280nm, laakiin maxaa yeelay dhererka dhererkiisa ka hooseeya 200nm waa vacuum ultraviolet, waxaa lagu nuugi karaa hawo, sidaa darteedna mowjada dhererka UVC ee ka gudbi kara jawiga waxay u dhaxeysaa 200-280nm, kan gaagaaban iyo ka khatarta badan dhererka dhererkiisu waa, laakiin maxaa yeelay waxaa xannibi kara lakabka ozone, kaliya qaddar yar ayaa gaari doona dusha sare ee kubbadda dhulka.
Sidee UVC uga shaqeeyaa jeermiska
UV wuxuu burburin karaa qaabdhismeedka kelli ee DNA (Bacilli) ama RNA (Virus) ee sheybaarka, wuxuuna kadhigi karaa bakteeriyadu inay dhinto ama aan dib u tarmi karin, si loo gaaro hadafka jeermiska.
Marka Jawaabtu waa Haa.
Laydhka UVC wuu dili karaa Covid-19
Laydhka Mercury UVC iyo laambadda loo yaqaan 'LED UVC lamp'
Taariikh ahaan, laambadda meerkuriga ayaa ahayd doorashada keliya ee jeermiska UV. Si kastaba ha noqotee, Heshiiska Minamata ee meerkuriga wuxuu u dhaqan galay Shiinaha illaa Ogosto 16, 2017. Heshiisku wuxuu u baahan yahay soo saarista, soo dejinta iyo dhoofinta meerkurida ay ku jiraan badeecadaha ku qeexan Heshiiska waa laga mamnuuci doonaa Janaayo 1, 2021, iyo laambadda meerkuriga sidoo kale waa inay halkaan kuqoran. Sidaa darteed, waqti badan uma harsan yahay laambadda meerkuriga, UVC LED-na waa tan keliya ee lagu kalsoonaan karo.
Waqtiga boostada: Jan-05-2021